Uyacelwa ukuthi uqaphele: imibhalo kaCovid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) isicupho sezindaba ezingamanga: UMartin Vrijland
umthombo: Ixhumeke ngokugcwele.nl
ICovid-19 Janet Ossebeard (imibuthano yezilimo, Ninefornews) i-coronavirus idokhumenti (bheka ngezansi) yisicupho. Kufanele wazi ukuthi i-IBM's Deep Blue supercomputer ekuqaleni konyaka we-1996 wompetha womhlaba uKasparov nge-chess neKhompiyutha ye-Aluminium yakwa-Google ngo-2016 iqhawe lomhlaba lomdlalo oyinkimbinkimbi kakhulu Go wakwazi ukushaya. Ngaphezu kwalokho, kufanele wazi ukuthi abezindaba bayakwazi ukwethula yonke into, kufaka konke (kufaka nethiyori)
Bangakwazi ukubeka yonke into ndawonye njengefilimu futhi bakwenze ucabange ukuthi yizindaba ngempela, ukuze abheke izindaba ezingamanga njengeNuCheck.nl bayishise ekugcineni. Ngawo wonke amaqoqo amakhulu wedatha namuhla, abaholi bomhlaba bayazi ukuthi bangadlala kanjani izinamba ziye kufinyelele ezingeni lokuqondisa le-micro.
Into ecashile ngakho konke lokhu ukuthi kuningi iqiniso lokuthi izindaba zokuzikhohlisa ziyasetshenziswa, kodwa ngenxa yokuthi abantu kamuva bazothola “ubufakazi” bokuthi kunezindaba ezingamanga, bangajikijela ingane ngamanzi okugeza.
Ngithanda ukukugcizelela lokhu kuwe futhi ngikweluleke ukuthi ufunde ngempela futhi usabalalise incwadi yami. Akekho noyedwa wokukhombisa amasu wokuphikiswa okulawulwayo. Hhayi ama-Ninefornews, Not WantToKnow, Not Jensen, Not Niburu, Not infowars. Yingoba kungumugqa wokugcina. Musa ingadi kuwo! In lesi sihloko futhi encwadini yami ngichaza leliqhinga eliphikisayo elilawulwa ngokuningiliziwe.
Lalela lapha ngokwesibonelo sendlela yomugqa wokugcina: isibonelo
Kulokhu okuthunyelwe kusuka metro.co.uk bona ukuthi leyo vidiyo kaJanet Ossebaard izobhalwa maduze kanjani njengezindaba ezingamanga.
Ukuxolisa kwami, angifuni ukuba yi-cocky and smart, kepha ngawuyeka umsebenzi wami ngaphezu kweminyaka eyisikhombisa edlule ngoba ngicasulwe ngamanga abezindaba. Ngaleso sikhathi, ngokwesibonelo, ngangisakholelwa ku-Alex Jones 'infowars futhi ngagcina sengiyisekela eminye imithombo yezindaba. Ngakho-ke ngikwazi ukuthola ngaphakathi ukuthi bonke bebengajabule neze ngaleli duck elixakile kuluma (bheka incazelo).
Yiba bukhali futhi ungaweli ngamanetha okuphepha namabutho emvula aphikisayo alawulwa (bona incwadi yami ukuthola eminye imininingwane voor lokhu kulandelana).
Ezinsukwini zakamuva, kuthunyelwe amavidiyo amaningi kimi ukuzongilimaza futhi angigqugquzele ukuthumela imiyalezo enjalo engabhalwa njengezindaba ezingamanga; mhlawumbe ngizama ukumnyama indawo yami. Ngakho-ke kufanele uqaphele ngempela futhi uhlale ugxeka. Encwadini yami ngichaza ukuthi ungaya kanjani kumthombo ofanele wolwazi (okwangempela kwakho) nokuthi singalubamba kanjani lolu hlelo lwegciwane.
"Indlela engcono kakhulu yokulawula ukuphikiswa ukuholela ngokwakho", uVladimir Lenin
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: indawo.nl, ninefornews.nl, wikipedia.org bbc.com
Kungani u-Ole Dammegard engumthombo omuhle eminye imithombo yezindaba
Isizathu sokuthi sihanjelwa kwinetha lokuphepha le-911 kubantu abanjengoGeorge van Houts
Ingabe uMartin Vrijland ulawula ukuphikisa? Cha: Funda lapha ukuthi akunjalo!
Amathegi: okunye, amanzi okugeza, indawo yokubopha uzungu, i-conspiracy theory, izinkolelo zendlovu, elawulwayo, coronavirus, Covid-19, documentary, fake, afakiwe, Janet, uhlobo, abezindaba, izindaba ezikhohlisayo, Izindaba, ninefornews, umphikisi, U-Ox unentshebe, i-alcabal.nl, isicupho
23 March 2020 ku-23: 25
Isibonelo, uyakholelwa ngempela ukuthi uRobert Jensen ukuphikisana kwangempela? Wenza amavidiyo amahle! Ucabanga ukuthi uqashwa sikabani isitudiyo? Lokho kwe (General Dutch Press Agency) John de Mol mhlawumbe?
Vuka ngempela… amanetha okuphepha: umugqa wokugcina
Ekugcineni ziqedwa ngesigcwagcwa ukuze zigobe inethi yokuphepha egcwele - enabalandeli nabo bonke - kuhhavini womlilo.
Ushintsho lwangempela aluveli kwabesilisa nabesifazane ngemuva kwekhamera! Lokho kukugcina ekukhohlisweni ukuthi bazokuhlelela. Ushintsho lwangempela luqala ngokuzivuselela!
23 March 2020 ku-23: 45
Ubakhulumela kanjani abantu sengathi babheka amaTelebbies. Sesame Street!… Pffff uyeke lokhu kuhlanganiswa kweqiniso okungenangqondo! "I-Cabal," "uTrump umsindisi," "Q" ("ulungele wena"), nokuningi kwalolo hlobo lwezinkolelo-mbono zokuphepha.
Madam uwukhulisa ngasese umbono wobukhomanisi!
UTrump akuyena umsindisi! Futhi ukusetshenzelwa kabusha kwezezimali okuqanjwe yilesi 'sizingi sesitshalo' Madam kuhlelwe kahle futhi sekwethulwa ngalokho manje okuqhamuka ngaphansi kwamehlo akho, noTrump ku-hood. Imephu yomgwaqo ebheke kobukhomanisi bezobuchwepheshe (wobushiqela) “Salvation State” .. enyuswa 'yindilinga yezitshalo' uJannet Ossebaard. Izindlela zobuchwepheshe: ezilawulwa ubuchwepheshe ... ngakho i-AI ... idatha enkulu: imodeli yaseChina yobukhomanisi bobuchwepheshe! Umphakathi omkhulu wobukhomanisi! Yilokho le ntokazi ekhuthaza!
24 March 2020 ku-00: 20
Sawubona John de Mol: UDiewertje Blok bekungaba yisinqumo esingcono kakhulu secebo lokuphepha….
24 March 2020 ku-00: 35
Quote (9:30 min.): "Uma kunokuvalwa okuphelele kwemithombo yezokuxhumana, ungesabi ngoba i-Operation Defender 2020 ithunyelwe ukubopha ohulumeni abonakele."
Cha 'indinganiso yezitshalo' ... izosetshenziselwa ukumisa abantu ukuthi baxhumane, ukuze ingavukeli ukuboshwa kwayo kokugcina.
24 March 2020 ku-01: 15
UShill Micha Kat uphakamisa le ndaba efanayo yokuphepha ye-Q Anon
24 March 2020 ku-11: 49
Ingqondo yonke yokuhlanya. Futhi ufunde amazwana angezansi, nawo aqala ukukhahlela, umugqa kanye nosinki. Vele bangathanda ukukholelwa umyalezo omuhle.
Bhuti omkhulu uzosisindisa kuma-elites amabi, Thanda umfowethu omkhulu, wethemba umfowethu omkhulu, wethembe uTrump, wethembe umkhosi. Kuzovela uhlelo lomhlaba omusha wothando lokuthula nokuzwana
Bazovuka ngendlela ebuhlungu lapho sekwedlule isikhathi.
E-US, futhi, manje usunalo lolu hlobo lomuntu ongamampunge oshumayela lolu hlobo lomyalezo. I-sasquatch izosisindisa, abafokazi bazosisindisa, uTrump uzosisindisa, ibutho lizosisindisa.
24 March 2020 ku-12: 29
Ukuphendula okuningi kwama-lyrical ngaphansi kwale vidiyo (covid19 ingxenye 3). Bheka amanye ama-akhawunti ngemuva kwamazwana. Iningi linamavidiyo afanayo we-youtube nababhalisile abangu-1 noma 2. Ama-akhawunti we-YouTube angagqamile abukeka njengama-akhawuntimbumbulu noma adalwe abambalwa abantu abafanayo
24 March 2020 ku-12: 33
Kugcwele ama-akhawuntimbumbulu, ama-akhawuntari ajulile nama-AI bots aphendula kwabezindaba zenhlalo. Ngeke usakwazi ukuthatha izimpendulo eziteshini ezinkulu zokuxhumana zenhlalo ngokungathi sína futhi ungazinaki.
24 March 2020 ku-16: 43
« I-Bill Gates 'quantum dots' ikhadi le-ID engenantambo eligcina ukuthi une-coronavirus nokuthi ingabe ugonyelwe
Ukuvuselela ukuvala i-Coronavirus covid-19: Uma uvuka futhi uqaphela ukuthi ubanjwe, yini ongayenza? »
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.285.007
Ukushona kwelanga op Inkinga yeCorona: lokhu sekuphelile nini futhi kufanele senzeni manje?
Harry qhwa op Inkinga yeCorona: lokhu sekuphelile nini futhi kufanele senzeni manje?
UMartin Vrijland op Inkinga yeCorona: lokhu sekuphelile nini futhi kufanele senzeni manje?
Rebel op Inkinga yeCorona: lokhu sekuphelile nini futhi kufanele senzeni manje?